Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး
1 Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 30th May 2009, 7:49 am
ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ Pen drive လေးကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါခင်ဗျာ.သိတဲ့ Members များ
2 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 30th May 2009, 11:54 am
ပေးထားတဲ့ file လေးကို အရင် Down လိုက်ပါ..
2. Flash Drive ကို စက်မှာတပ်ထားပြီးတော့ ပေးထားတဲ့ BootIt.exe ကို Run လိုက်ပါ။
3. Flip Removable Bit ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ.
ပြီးရင်တော့ PenDrive ကို ဖြုတ်လိုက်ပါ.. အဲဒီ့အခါကျရင် Windows က အစ်ကို့ pen ကို Fixed Disk အနေနဲ့ ဘဲ Detect သိတော့မှာပါ... (removable Disk အနေနဲ့ မသိတော့ပါ)
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကတော့ FlashDrive ကို Partition ထပ်ခွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
Start -> Run ထဲကနေ diskmgmt.msc ကို ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Ok ပေးလိုက်ပါ။။
Disk management window ထဲရောက်ရင်တော့, flashdrive မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ Delete Partition: ဆိုတဲ့ Option ကို ရွေးပေးပါ။[You must be registered and logged in to see this image.]
flashdrive မှာ Right Click ထပ် နှိပ်ပြီးတော့ New Partition ဆိုတဲ့ option လေးကို နှိပ်ပေးပါ။[You must be registered and logged in to see this image.]
New Partition Wizard ကျလာရင် သူလုပ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းလိုက်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် "Primary Partition" ကိုရရှိပါမယ်။ Partition Size ကို ရွေးဖို့အတွက် Dialog Box ကိုရောက်လာရင်တော့, အစ်ကိုတို့ပေးတဲ့ Size က မူရင်းရှိနေတဲ့ drives capacity ထက်နည်းပြီးတော့ ပေးလိုက်နော်။ ဒါမှ Partation ကို နောက်ထပ် ပိုင်းလို့ရမှာ။[You must be registered and logged in to see this image.]
သူလုပ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်းသာ ဆက်လုပ် , drive letter ပေးတာတို့ partition ကို format လုပ်တာတို့ရောက် ရင်တော့ File System ကို Fat32 နဲ့ လုပ်စေချင်ပါတယ်။
first partition လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ , နောက်ထပ် partitions ကို လုပ်ဖို့အတွက် step3က အတိုင်း ထပ်လုပ်ပေးရုံပါဘဲ။[You must be registered and logged in to see this image.]
ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အစ်ကိုတို့ရဲ့ USBflash drive မှာ multiple partitions ခွဲထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
****အခြားဖိုရမ်တွင် ကူးယူဖော်ပြလိုပါက ဤ Site အား Credit ပေးရန်။****
3 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 30th May 2009, 6:17 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...အဲဒါက Pen ကို Format ပြန်ရိုက်ရမယ်ထင်တယ်နော်..format ပြန်ရိုက်ရရင်တော့သွားပါပြီ...အများကြီးဗျ...ဟိုလေ..Format မရိုက်ရတဲ့ဟာမရှိဘူးလားခင်ဗျာ
4 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 30th May 2009, 9:31 pm
Hey bro..don't lazy to format your Pen drive.. ...
I think if you don't format your Pen drive & do partition you may lost some of your data... That's my think only... If I'm wrong pls tell me...
5 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 1st June 2009, 5:13 pm
Format မရိုက်ချင်ရင်တော့ အသစ်ဝယ်လိုက်လေ....
Admin ပြောသလိုဘဲ Format မရိုက်ဘဲနဲ့တော့ ခွဲလုိ့ရမယ်မထင်ဘူးခင်ဗျ....
6 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 1st June 2009, 5:27 pm
ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ... format ဘဲရိုက်လိုက်ပါတော့မယ်နော်..အခုလိုဖြေကြားပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
7 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 1st June 2009, 5:30 pm
အကယ်လို့ Format မရိုက်ဘဲနဲ့ Partition ပိုင်းလို့ရတဲ့ နည်းတွေ့ခဲ့ရင်တော့
လောလောဆယ်တော့ စာမေးပွဲေ့ကြာင့်.... (ငိုချင်လာပီ)
8 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 15th July 2009, 9:40 am
hi par bro.I ka bootit.exe file ko download swal loe ma ya loe par ako doe yay.nauk site ka nay tin pay par oo bro doe yay.I ka pendrive ko partition pine chin loe par ako.tin pay par oo naw.
9 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 22nd August 2009, 9:28 am
အစ်ကိုရေ အင်္ဂလိပ်ဆိုလဲအင်္ဂလိပ်ပေါ့ မြန်မာဆိုလည်းမြန်မာပေါ့.........ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးမဖတ်တတ်ဘူးခင်ဗျာ
နောက်တစ်ခါကြရင်........တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ ရေးပေးပါ လို့ နော်
10 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 22nd August 2009, 11:37 am
myolwinoo wrote: hi par bro.I ka bootit.exe file ko download swal loe ma ya loe par ako doe yay.nauk site ka nay tin pay par oo bro doe yay.I ka pendrive ko partition pine chin loe par ako.tin pay par oo naw.
ကို မျိုးလွင်ဦး ခင်ဗျာ .. ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးစေချင်ပါတယ် ... ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်စေချင်လို့ပါဗျာ ..
11 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 22nd August 2009, 11:45 am
ကျနော် ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ ..
2shared ကပဲ ဒေါင်းလိုက်ပါ ..
Save file to PC ကို နှိပ်ပေးရပါမယ်
12 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 22nd August 2009, 8:10 pm
ဖြစ်နိုင်ရင် ifile.it နဲ့ ပြန်တင်ပေးပါလားဟင်
13 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး on 22nd August 2009, 10:06 pm
ကျနော် အဲဒီက ပြန်ဆွဲတာ ရပါတယ်ဗျာ .. ဟိုးအောက်ဆုံးမှာ ဗျ .. သေချာရှာမှတွေ့လိမ့်မယ် ..
ကဲ လာလေရော့ ...
14 Re: Pen ကို Partition ပိုင်းချင်လို့ပါကူညီပါဦး